काठमाडौंमा आँखा पोल्ने प्रदूषण, वातावरण विभाग भन्छ: ‘सकेसम्म घरबाहिर ननिस्कनू
काठमाडौं, २१ पुष। सोमबार दिनभरि काठमाडौं उपत्यकामा घाम लागेन । मङ्गलबार अपराह्नसम्म घाम लागेन । कतैकतै मधुरमधुर घाम देखियो । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बुधबारबाट मौसममा केही सफा हुनेछ । सोमबार र मंगललबार काठमाडौं उपत्यकामा घाम नलाग्दा अँध्यरो देखिएको छ । मंगलबारको तुलनामा सोमबार अझ अँध्यारो बढी देखिन्थ्यो ।
सडकमा हिँड्दा धेरैले आँखा पिरोपिरो भएको महसुस गरे । खासगरी साँझपख बाहिर हिँड्ने धेरैले यसरी आँखा पोलेको महसुस गरे । तर, धेरैले सामान्य धुलोका कारण यस्तो भएको भन्दै बेवास्ता गरे । तर, यो समस्या सामान्य नभई जटिल रहेको मौसमविद् तथा चिकित्सक बताउँछन् । यस्तो प्रदूषणले मुटु, मस्तिष्क र फोक्सोमा समस्या आउने विज्ञहरु बताउँछन् ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र समीर भन्छन्, ‘मुटु, मस्तिष्क र फोक्सोमा समस्या आउनुमा ३० प्रतिशत कारण धुवाँ र धुलो हो ।’ डा. समीरका अनुसार एउटा स्वास्थ्य मानिसले औसतमा प्रतिमिनेट १२ देखि १५ पटक सास फेर्छ भने बालबालिकाले ३० देखि ४० पटकसम्म । धुलो र धुवाँ श्वासप्रश्वासबाट शरीरमा प्रवेश गर्ने गर्छ । भनाइ छ, मानिसले खानाबिना तीन साता र पानीबिना तीन दिन बाँच्न सक्छ, तर हावाबिना तीन मिनेट पनि बाँच्न सक्दैन ।
उनी थप्छन्, ‘अक्सिजन नहुँदा रगत सर्दैन र सेल÷कोशिकाहरू मर्न थाल्छन् । यस्तै, प्रदूषित हावाले पनि शरीरलाई हानी गर्छ ।’ वातावरण विभागले भन्यो– ‘सकेसम्म घरबाहिर ननिस्कनू’ वायु प्रदूषण बढेपछि वातावरण विभागले सकेसम्म घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ । वायु प्रदूषणसम्बन्धी सूचना निकाल्दै विभागले बालबालिका, वृद्धवृद्धा, श्वासप्रश्वास र मुटुका बिरामी बढी जोखिममा रहेको जनाएको छ । उनीहरूलाई सकेसम्म घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ ।
सोमबारदेखि मौसममा आएको बदलावसँगै काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको स्तर अत्यधिक बढेको हुनाले विभागले यो आग्रह गरेको हो । बिहान र बेलुकाको समयमा प्रदूषण अत्यधिक बढेको पाइएकाले घरबाहिर निस्कँदा विशेष सावधानी अपनाउन विभागले सुझाएको छ । त्यस्तै, तराई क्षेत्रका सहरमा पनि वायु प्रदूषणको मात्रा उच्च भएकाले विभागले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ । फोहोर र आगो बाल्दा वायु प्रदूषण बढ्ने भएकाले यस्तो कार्य नगरिदिन पनि विभागले अनुरोध गरेको छ ।
विश्वकै प्रदूषित सहर काठमाडौं कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण काठमाडौं उपत्यकाको वायुको अवस्थामा केही महिनाअघि उल्लेख्य सुधार देखिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकालगायत विश्वभर नै वायु प्रदूषण घट्दै गइरहेको थियो । तर, लकडाउन खुलेसँगै सवारीसाधन, कलकारखानालगायत कारण वायुप्रदुषण बढेको छ । अर्कातर्फ पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण काठमाडौं उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम बढेको र वायु अत्यधिक प्रदूषित भएको मौसमविद् बताउँछन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागको आँकडाअनुसार सोमबार काठमाडौंको प्रदूषण एअर क्वाली इन्डेक्स (एक्युआई) ४०३ थियो । अघिल्लो दिनको भन्दा यो दोब्बर भन्दा बढी हो । वातावरण विभागको वायु गुणस्तर निगरानीका अनुसार आइतबार भैंसेपाटीको एक्युआई १७३ थियो । २४ घण्टामै वायुको गुणस्तरमा दुई सय प्रतिशतभन्दा बढीले खराब भएको देखिन्छ । सोमबार काठमाडौंको वायु प्रदूषण विश्वमै नम्बर एकमा पुग्यो ।
स्वीटजरल्याण्ड मुख्यालय रहेको एक्युएअरले सोमबार ७.४५ बजे काठमाडौंको एक्युआई ४८७ पुगेको देखाएको छ । तर, दिउँसो भने घटेको छ । दिउसो साढे दुई बजे एक्युआई २९४ पुगेको थियो । त्यसबेला भने काठमाडौंमा मधुरो घाम देखियो । एक्वुआई ३०० पुग्नु भनेको जोखिमपूर्ण हो। तीन सयभन्दा माथि जानुचाहिँ घातक हो। यसैले अहिलेको अवस्था घातक हो ।
वायु प्रदूषणले पछिल्ला वर्षमा आमनागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको छ । संविधानको धारा ३० को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लेख छ । उपधारा २ मा वातावरणीय प्रदूषणका कारण पीडित भए प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउन पाउने प्रावधान पनि छ ।